Noho ny Tsindry Avy Amin’ny Fitantanan-draharaha Momba Ny Aterineto, Hanakarama Mpanaramaos Votoaty Miisa 2.000 Fanampiny Ilay Sangany Amin’ny Fampiharana Fampitambaovao Ao Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2018 13:11 GMT
Fivarotana gazety ao Beijing. Sary avy amin'i Ernie tao amin'ny Flickr (CC BY 2.0)
Nosoratan'i Catherine Lai ity lahatsoratra ity ary navoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press (HKFP) tamin'ny 4 Janoary 2016. Navoaka ho an'ny Global Voices eo ambany fifanarahana fiaraha-miasa ny endriny eto ambany.
Manana drafitra ny handray mpiasa vaovao miisa 2.000 ilay sangany amin'ny fampiharana fanangonana vaovao ao Shina, Jinri Toutiao, mba hanara-maso ireo votoaty ao amin'ny sehatrany, rehefa avy nandraisan'ny mpandrindra aterineto ao amin'ny firenena fepetra ny fanakendana ny votoaty tao aminy.
Ao anatin'ny dingan'ny fakàna mpiasa, homen'ilay orinasa tombony ireo mpikambana avy amin'ny Antoko Kaominista.
Jinri Toutia, izay midika hoe Ny Lohantenin-gazety Androany, dia mpamaky fahana RSS namboarina hamatsy votoaty ho an'ireo mpamaky, miankina amin'ny izay mahaliana azy ireo, mampiasa tahirinkevitra ary algoritima momba ny tolokevitra. Najoro tamin'ny 2012, nirehareha tany amin'ny Vovonambe Iraisampirenena ho any Aterineto 2016 i Zhang Yiming, Tale Jeneralin'ny orinasa fa manana mpampiasa miisa 600 tapitrisa voasoratra ilay fampiharany vaovao ary mpampiasa mavitrika miisa 140 tapitrisa isanandro no mandany 76 minitra eo amin'ilay izy.
Mandritra izany, mampiasa fahaizana voatr'olombelona ilay fampiharana mba hanomezana endrika ny fahambaovao hifanaraka amin'ny ilain'ny mpamaky, mbola eo ambanin'ny sivan'ny fanjakàna hatrany ny teknolojia. Tamin'ny herinandro farany teo, niampanga an'ilay fampiharana fitsinjaràna vaovao ho mizara votoaty vetaveta ny lehibe mpandridra aterineto ao amin'ny firenena.
Niteny tao anaty fanamarinana iray ny Fitantan-draharaha miandraikitra ny Habaka Aterineto fa nizara vaovao an-tsokosoko ny Toutiao nefa tsy manana ny fahaizana hanaovana izany avy amin'ny manampahefana. Nampiany hoe voakasik'io koa ny olan'ny “fandrika hoan'ny tsindry – na clickbait” ao amin'ilay fampiharana.
Nitondra an'i Toutiao hampiato nandritra ny 24 ora ny fanomezana vaovao farany ho an'ny enina amin'ireo sampany ny didy navoakan'ny mpandrindra.
Manangana tafika iray ho mpanaramaso votoaty
Tamin'ny 3 Janoary, nitatitra ny fampahalalambaovaon'ny tanibe Shinoa fa nandray mpanaramaso votoaty niisa 2.000 ny Toutiao.
Araky ny tolotrasa, mila mpiasa ny Toutiao mba handalina lohahevitra / heviteny miisa 1.000 isanandro ho an'ny votoaty tsy ara-dalàna ary mitady kandidà izay liana amin'ny vaovao, amin'ny tranga misy amin'izao fotoana izao, ary manana “fahatsapana ara-pôlitika sy fitsarana” tsara. Takiana amin'ireo mpifaninana ho amin'ilay toerana ny fananana diplaoma dingana voalohany na mihoatra, ary nolazainy fa mena tombony ireo mpikambana avy amin'ny Antoko Kaominista.
Efa mampiasa mihoatra ny 4.000 mpiasa ilay orinasa, izay asany voalohany ny mandinika votoaty. Efa ho tonga 10.000 ny isan'ny mpanaramaso votoaty hoy ireo toniandahatsoratry ny Jinri Toutia, mahatonga ny ekipan'izy ireo no ny ngeza indrindra amin'izany ao amin'ny firenena.
Manomboka ‘vanimpotoana’ vaovao
Taorian'ilay didy navoakan'ny mpandrindrà tamin'ny herinandro lasa, nakaton'ilay fampiasa ihany koa ny fantsona nataon'ilay fampiasa ho an'ny “orinasa” ka nosoloiny iray nomena anarana hoe “vanimpotoana vaovao”. Lasa iray amin'ireo fizarana tonga dia vonona ao amin'ilay fampiharana izy io.
Maninona no niova ny anarana? Nandritra ny kongresy Nasionaly faha-19-n'ny Antoko Kaominista Shinoa, natsofoka ho ao anatin'ny lalàm-panorenan'ny antoko ireo eritreritry ny Filoha Shinoa Xi Jinping, ho eo ambanin'ny toko “Eritreritra momba ny sosialisma miaraka amin'ny Toetra Mampiavaka ny Shinoa ho an'ny Vanimpotoana Vaovao”. Nanomboka teo, Lasa fiteny ara-pôlitika mahazatra ny “Vanimpotoana vaovao” ampiasaina hanondroana ny fitarihan'i Xi.
Nilaza tamin'ny Voice of America i Lou Xiling, ilay mpikirakira ny raharaha amin'izao fotoana izao, fa tsy voalohany no nanakatonan'i Jinri Toutiao ny fantsona fizaràny vaovao:
Talohan'ny nanakatonany ny fantsony natao ho an'ny orinasa, efa nampanginina ireo fantsona tahaky ny “Fanolorankevitra ho an'ny Vaovao”, “Lohahevitra Mafana” izay mampiseho ny tena zavamisy ao anatin'ny fiarahamonina. Tena mampahatahotra io. Heveriko fa afaka fotoana fohy, tsy hanana votoaty mahaliana intsony i Jinri Toutiao, raha tsy hoe misy fiovana lehibe eo anivon'ny fiarahamonina. Any aoriana any, araky ny novinaniantsika, mety ho lasa sarotra ho antsika ny hahita ny tena vaovao.
Satria tamin'ny andro voalohan'ny 2018 no natao ny fanakatonana ilay ampahany ho an'ny orinasa, ny mpampiasa Twitter Uromayutori nananihany momba ny fanombohan'ilay “vanimpotoana vaovao”:
Efa manivana mafy ny tatitra vaovao araky ny fepetra ofisialy takian'ny fampielezankevitra ilay fantsona natao ho an'ny orinasa ao amin'ny Jinri Toutiao. Fa ho an'ny sasany tsy afaka ny handeha lavitra ny sivana. Fanivanan-tena, resaka mifanatrika, fampanginana fantsona, fametrahana fantsona “vanimpotoana vaovao”. Tsy misy fivazavazàna intsony, ary tsy afaka ny hangina akory ianao. Resaka fotoana fotsiny sisa alohan'ny hanerena olona hitsangana hanome toky tsy fivadihana. Lasa tsy afaka nialàna ireo rehetra ireo, nanomboka ny andro nanakanan'izy ireo ny olona nanandra-peo. Tsara zany, 2018, fanombohan'ny vanimpotoana vaovao.
Misy loharano tsy nitonona anarana avy ao amin'ny Jinri Toutiao nilaza tamin'ny The Paper fa nisy fiantraikany be tamin'ny orinasa ny fanakatonana ilay ampahany natao ho an'ny orinasa : “Fa hotapahanay tokoa ny hevitra hametrahana ny taridalàna ho fanehoankevitra nomen'ny departemanta mahefa”.
Nolazain'i Toutiao fa nosoloiny ilay fizaràna mba “hanondrotana tsara kokoa ny hevitra fototra, hanaparitaka ny fanahin'ny Kongresy faha-19 -n'ny Antoko, ary hitaterana ny fananganana ny vanimpotoana vaovao”. Nolazainy ihany koa fa nanadio ireo kaontin'ny media tsy miankina manana votoaty tsy dia tsara kalitao loatra ry zareo, ka fantsona 1.101 no nakatony.
Nampian'ilay loharano fa niasa mandrakariva nanao lasibatra ireo fandrika ho an'ny tsindry sy ny votoaty ratsy ilay fampiharana, tamin'ny fampiasàna fomba henjankenjana kokoa raha mitaha amin'ireo fampiaharana mitovitovy aminy, nefa toa hita fa tsy ampy ny vitan'izy ireo.
Ny mpikirakira resaka pôlitika ao Hong Kong, Johnny Lau Yui-Siu, nilaza tamin'ny Apple Daily fa amin'ny fanomezana tombony an'ireo mpikambana ao amin'ny antoko, niezaka ny orinasa mba hampitony ny manampahefana sy hiaro ny tenany, ary nanizingizina tsy ho ela dia mety hiverina tamin'ny taloha ilay mpampahalala vaovao.
Ato anatin'ny fotoana fohy, afaka maneho tsara ny vokatry ny fampitahoran'ny manampahefana [ny fiovàna] fa mety tsy ho vitan'ireo manampahefana ny hanara-maso ireo mpampiasa aterineto efa ho an-davitrisa.
1 andro izayEoropa Andrefana